“War Iskuma Hayaan Cadhada Dhalinyarada Bilaa Shaqada Ah iyo Xukumadda Hantidooda Ku Hor Boobaysaa..” Jamaal Cali Xuseen |
“War Iskuma Hayaan Cadhada Dhalinyarada Bilaa Shaqada Ah iyo Xukumadda Hantidooda Ku Hor Boobaysaa..” Jamaal Cali Xuseen
Hargeysa(GNN)Musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga Ucid, aqoon yahan Jamaal Cali Xuseen, ayaa xukumadda iyo odayaasha guurtida ku tilmaamay kuwo moog dareenka dhabta ah ee dhalinyarada Somaliland oo badi bilaa camal iyo bilaa rajo ah, kuwaasi oo uu tilmaamay inay ka gadoodsan yihiin hantida umadda ee xukumadda ka dhigayso mid gaar loo leeyahay.
Jamaal Cali Xuseen, oo bartiisa facebook ku baahiyay falanqayn ku saabsan arrinta hadda socota ee haamaha shidaalka ayaa madaxda xukumadda ku macneeyay mid aakhira iyo aduun ba ku seegaysa boobka hantida umadda, isagoo ku waaniyay inay wareejinta xoolaha umadda ka waantoobaan.
“War iskuma hayaan Dhalinyaradda Somaliand dareenkooda dhabta ah iyo odayaasha Saleebaan hogaaminayo ee doonnaaya inay mar kale dulmi ugu hiilliyaan Xukuumadda ku meel-gaadhka ah ee Siilaanyo, oo doonaysa inay si badheedh ah u iibiyaan dhammaan Hantidii qarankani lahaa oo imika la maraayo Haamihii keydka shidaalka berbera.
Xukuumaddan wakhtigeeddii dhaafay, walee war uma hayso Cadhadda iyo dareenka dhabta ah ee dhalinyaradda Somaliland ee bilaa shaqada iyo bilaa rajadda ah ee ay Hantidoodii ku takri falayso habeen iyo maalin si badheedh ah ay Inta Xukuumadda ugu sareeysaa ugu hor boobayso. Walee war la Iskuma hayo oo wax badso wax beel-bay dhashaaye, waar yaa tollow u nasteexeeya oo ku yidhaahda ” Waar dalka sidan ka daaya kolay if iyo aakhiraba waa seegteene” Markan kacdoon Dhalinyaro ayey Xukuumaddani Halis u tahaye bal Weynu eegi halkuu kibirkaasi la maro.” Ayuu Jamaal ku yidhi qoraalkiisa.
Xukumadda ayaa ku hawlan qorshe ay ku wareejinayso kaydka haamaha shidaalka Berbera oo ganacsatada shidaalka keenaa danaynayaan. Waxa hore xukumadda loogu canaantay wareejinta warshadii Laydhka Hargeysa, tii Berbera, dekedda Berbera ee qorsheheedu socdo iyo goobo kale.